အစ္စရေးပိုင်နက် အတွင်းပိုင်းအထိ ဒုံးကျည်တွေ ပစ်မယ်လို့ ဟားမတ်စ်အဖွဲ့ ခြိမ်းခြောက် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး အစ္စရေးပိုင်နက် အတွင်းပိုင်းအထိ ဒုံးကျည်တွေ ပစ်မယ်လို့ ဟားမတ်စ်အဖွဲ့ ခြိမ်းခြောက်
A volley of rockets fired from the Gaza Strip was intercepted by the Iron Dome system near the Israeli town of Beersheba, November 15, 2012. Israel launchedamajor offensive against Palestinian militants in Gaza on Wednesday. Photo by Uri Lenzl/Flash90
အစ္စရေးပိုင်နက် အတွင်းပိုင်းအထိ ဒုံးကျည်တွေ ပစ်မယ်လို့ ဟားမတ်စ်အဖွဲ့ ခြိမ်းခြောက်
ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာ နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့က အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ ပါလက်စတိုင်း စစ်သွေးကြွတွေကြား အပြန်အလှန် တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက် ပါလက်စတိုင်း စစ်သွေးကြွ ဟားမတ်သ် အဖွဲ့က ဒုံးကျည်တွေကို အစ္စရေးနိုင်ငံပိုင်နက် အတွင်းပိုင်းအထိ ပိုမိုရောက်ရှိအောင် ပစ်ခတ်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်လိုက်ပါတယ်။
အစ္စရေးက ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသကို ဆက်တိုက်ခိုက်နေရင် အစ္စရေးရှိ အက်ဒေါ့မြို့နဲ့ ဘီယာရှိဘာမြို့တို့ဟာ ဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ နောက်ထပ် ပစ်မှတ်တွေ ဖြစ်လာမယ်လို့ ဟားမတ်စ် အဖွဲ့က သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ အစ္စရေးတွေဟာ နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့က တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ ဂါဇာကမ်းမြောင်ရှိ ပါလက်စတိုင်း နေရာတွေကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ ပါလက်စတိုင်း ၆ ဦး သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ပါလက်စတိုင်းတို့ကလည်း တုံ့ပြန်မှုအဖြစ် ဒုံးကျည်တွေနဲ့ အစ္စရေးနိုင်ငံထဲကို ပြန်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ အိမ်မှာနေထိုင်နေတဲ့ အစ္စရေးတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပါလက်စတိုင်းတွေဟာ အစ္စရေးစစ်သားတွေ ရှိနေတဲ့ စစ်ကားကိုလည်း ဖောက်ခွဲခဲ့ပါတယ်။
အစ်စရေးပိုငျနကျ အတှငျးပိုငျးအထိ ဒုံးကညျြတှေ ပဈမယျလို့ ဟားမတျဈအဖှဲ့ ခွိမျးခွောကျ
ဂါဇာကမျးမွောငျဒသေမှာ နိုဝငျဘာလ ၁၂ ရကျနကေ့ အစ်စရေးတပျဖှဲ့တှနေဲ့ ပါလကျစတိုငျး စဈသှေးကွှတှကွေား အပွနျအလှနျ တိုကျခိုကျမှု ဖွဈခဲ့ပွီးနောကျ ပါလကျစတိုငျး စဈသှေးကွှ ဟားမတျသျ အဖှဲ့က ဒုံးကညျြတှကေို အစ်စရေးနိုငျငံပိုငျနကျ အတှငျးပိုငျးအထိ ပိုမိုရောကျရှိအောငျ ပဈခတျမယျလို့ ခွိမျးခွောကျလိုကျပါတယျ။
အစ်စရေးက ဂါဇာကမျးမွောငျဒသေကို ဆကျတိုကျခိုကျနရေငျ အစ်စရေးရှိ အကျဒေါ့မွို့နဲ့ ဘီယာရှိဘာမွို့တို့ဟာ ဒုံးကညျြနဲ့တိုကျခိုကျဖို့ နောကျထပျ ပဈမှတျတှေ ဖွဈလာမယျလို့ ဟားမတျဈ အဖှဲ့က သတိပေးခဲ့ပါတယျ။ အစ်စရေးတှဟော နိုဝငျဘာ ၁၂ ရကျနကေ့ တိုကျလယောဉျတှနေဲ့ ဂါဇာကမျးမွောငျရှိ ပါလကျစတိုငျး နရောတှကေို ပဈမှတျထား တိုကျခိုကျခဲ့လို့ ပါလကျစတိုငျး ၆ ဦး သဆေုံးခဲ့ရပါတယျ။
ပါလကျစတိုငျးတို့ကလညျး တုံ့ပွနျမှုအဖွဈ ဒုံးကညျြတှနေဲ့ အစ်စရေးနိုငျငံထဲကို ပွနျပဈခတျခဲ့ရာ အိမျမှာနထေိုငျနတေဲ့ အစ်စရေးတဈဦး သဆေုံးခဲ့ရပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ပါလကျစတိုငျးတှဟော အစ်စရေးစဈသားတှေ ရှိနတေဲ့ စဈကားကိုလညျး ဖောကျခှဲခဲ့ပါတယျ။
Previous articleဆော်ဒီဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်အဖြစ် အဘီဇာအစ်ကို ထရမ့် အဆိုပြု
Next articleအမေရိကန်မှာ မုန်းတီးမှုကြောင့် ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေ မြင့်တက်နေ